Itoobiya oo sheegtay in 70 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ay ku dileen gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaItoobiya oo sheegtay in 70 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ay ku dileen gudaha Soomaaliya
September 15, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Janaraal Yilma Merdassa. [Sawir Hore]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay ku dhawaad 70 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gudaha Soomaaliya.
Warbaahinta dowladda ku dhow ee Fana ayaa sheegtay in duqeynta uu ujeedkoodu ahaa in lagu fashiliyo weerar ay Al-Shabaab ku qaadi lahayd ciidamada Itoobiya ee katirsan howlagalka Midowga Afrika Amisom ee Soomaaliya.
Sidoo kale warbaahinta ayaa sheegtay in labo gaari oo qarax laga soo buuxshay lagu burburshay weerarka.
Itoobiya ma aysan sheegin deegaanka iyo wakhtiga ay dhacday duqeyntu.
Fana ayaa soo xigatay Janaraal Yilma Merdassa oo katirsan ciidanka cirka oo dhahaya “waxaanu ku guuleysanay 100-kiiba boqol qorshahayagii.”
Ma jirto wax hadal ah oo dhanka Dowladda Federaalka Soomaaliya kasoo baxay.
Kenya oo katirsan Amisom ayaa sidoo kale qaaday duqeymo cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, halka milatariga Mareykanku uu qaaday 22 duqeymood oo uu ku beegsaday Al-Shabaab intii lagu guda jiray sanadkan.
Dowlad Goboleedyada Soomaaliya oo shuruudo ku xiray wadahadalka Dowladda Dhexe
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland’s security forces have launched anti-terror raids on the houses in Bosaso port town of Bari region on Thursday. Puntland Mirror correspondent in Bosaso Abdullahi Bodacade reported that armed forces heavily deployed into [...]
Wefdiga Soomaaliya ku metelaya dhageysiga dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya oo u safray Hague
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wefdi uu hoggaaminayo Raysulwasaare Ku Xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo Soomaaliya ku metelaya dhageysiga dacwada kala dhaxeysa Kenya ayaa maanta oo Isniin ah u safray magaalada Hague ee dalka Netherlands [...]